KISMAAYO, Soomaaliya - Diyaarado dagaal ayaa weerar dhanka cirka ah ka fuliyey saacadihii lasoo dhaafey degaanka Janaay Cabdalla, oo qiyaastii 40 KM ujira magaalada Kismaayo ee xarunta KMG ah ee maamulka Jubbaland.
Saraakiisha ciidanka xooga Soomaaliya ee ku sugan gobolka ayaa sheegay in duqaynta oo ay fuliyeen diyaaradaha Mareykanka lagu dilay 11 kamid ah dagalamayaasha xoogaga Al-Shabaab.
Xubnaha lagu diley duqaynta ayuu sheegay Taliska ciidanka xooga ee gobolka inay ku jiraan saraakiil, inkasta oo uusan shaacin magacyadda Horjoogayaasha lagu khaarijiyey duqaynta.
Weerarka cirka ah kadib, ciidamada xooga, oo ay wehliyaan kuwa maamulka Jubbaland ayaa tegay meesha ay ka dhacdey duqaynta, iyaga oo kasoo qaadey muuqaalo iyo sawirro.
Ma jiro war rasmi ah oo ay Al-Shabaab kasoo saartey hadalka kasoo baxay Taliska ciidamada Soomaaliya.
Duqayntaan ayaa kusoo aadeysa xili dhowaan weerar noocaan ah oo aanan la ogeyn cida fulisay oo ka dhacay magaalada Sakow ee gobolka Jubada Dhexe lagu diley saddex caruur ah, laguna burburiyey Dugsi Quraan iyo Isbitaalka guud ee magaalada.
Mareykanka ayaa iska fogeeyay inuu isaga fuliyey duqayntaasi, xili dowlada Soomaaliya ay sheegtey in weerarka ku dishey dagaalamayaal Al-Shabaab ah, oo uu ku jiro Xasan Yacquub oo ah sarkaal sarre, laakiin ay beenisay warkaasi Kooxda Al-Shabaab.
Madaxweynaha ayaa ku dhawaaqay markale dagaal Al-Shabaab looga saarayo Bu'aalle.